calculating - Synonyms of calculating | Antonyms of calculating | Definition of calculating | Example of calculating | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for calculating
Top 30 analogous words or synonyms for calculating
အက္ခရာသင်္ချာ Algerba ဟူသော စာလုံးသည် အရဘီဘာသာစာလုံး al-jabr မှဆင်းသက်လာပြီး ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း (Reunion) ဟု ပါရှန်းလူမျိုး သင်္ချာပညာရှင် Muhammad ibn Mūsā al-khwārizmī မှ အေဒီ ၈၀၀ တွင် al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala (Summary Concerning Calculating by Transposition and Reduction) စာတမ်းတွင် ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ အက္ခရာသင်္ချာ ၏ ဖခင်အဖြစ် ထင်ရှားသူ Diophantus ၏ နေရာတွင် Muhammad ibn Mūsā al-khwārizmī က အစားထိုးဝင်ရောက်ဖွယ် ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည်။
အက္ခရာသင်္ချာ ယနေ့ခေတ် သင်္ချာသမားများသုံးစွဲနေသော အက္ခရာသင်္ချာ(Algebra) ကိုစတင်ခဲ့သူမှာ မူဆလင်ပညာရှင် အယ်(လ)ကွာရာဇမီ Al-Khuwarazmi(AD-847) ဖြစ်သည်။ သူရေးသားခဲ့သော ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်သည့် The Book of Summary concerning calculating by transposition and reduction ဆိုသောစာအုပ်မှ Algebra ဆိုသောဝေါဟာရ ကိုရရှိခဲ့သည်။ ယခုကွန်ပျူတာများတွင်သုံးသော အဆင့်ဆင့်တွက်နည်း algorithm ဟူသောနာမည်မှာ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အယ်(လ)ကွာရာဇမီသည် သင်္ချာညီမျှခြင်းများကို ဖြေရှင်းရာတွင် နည်းနှစ်နည်း သုံး၍တွက်ချက်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
Mathcore Mathcore သည် math rock လွှမ်းမိုးမှုကို ယူဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။(math rock နှင့်အတူ hardcore)၊ အစောပိုင်း hybrid ထဲတွင် ပါဝင်သော တီးဝိုင်းများမှာ Rorschach, Starkweather, Botch နှင့် Converge တို့ပါဝင်သည်။ ၁၉၉၀တွင် အုပ်စုအချို့စတင်၍ ပေါ်ထွက်လာသည်။ Massachusetts မှ Cave in, Connecticut မှ Cable, Kansas City မှ Coalesce နှင့် Switzerland မှ knt စသည့် တီးဝိုင်းပါသည်။ mathcore ဟုသော ဝေါ်ဟာရသည် The Dillinger Escape Plan ၏ ပထမဆုံး album “Calculating Infinity” တွင် သုံးထားသည်။ The Dillinger Escape Plan သည် mathcore ကို တီထွင်သူ မကြာခဏမှတ်ယူကြသည်။ mathcore မတိုင်မီ ဤပုံစံသည် noisecore ဟုအမည်ရသည်။
ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန် Up to February 28 in the calendar you are converting from add one day less or subtract one day more than the calculated value. Remember to give February the appropriate number of days for the calendar you are converting into. When you are subtracting days to move from Julian to Gregorian be careful, when calculating the Gregorian equivalent of February 29 (Julian), to remember that February 29 is discounted. Thus if the calculated value is -4 the Gregorian equivalent of this date is February 24.